Tokyo - Gpedia, Your Encyclopedia
w:jp:東京都 Tokyo ama Tookiyo (東京) waa caasimada dalka Jabaan. Magaalada waxee ku taalaa dhinaca koonfur bari ee jasiirada Honshu. Tookiyo waxaa degan dad gaaraayo 13,010,279 oo qoys, waxeena magaalada ka midtahay magaalooyinka ugu waaweyn caalamka.
Waayadii hore Magaalada Tokyo waxee ahaan jirtay tuulo yar oo kaluunka lagu gado oo la dhoho Edo. Sanadka marka oo ahaa 1457 ayaa ninka lagu magacaabo Ota Dokan waxoo dhisay dhul lagu magacaabo Edo Kastle. Sanadka marka oo ahaa 1590kii neh, Tokugawa Ieyasu waxoo Edo ka dhigtay degmadiisa, waxoona sanadka marka oo ahaa 1603 noqday shogun, isla markaas neh waxee Magaalada u noqotay saldhiga xukumadiisa militari. Intii lagu jiray Xiliyadii Edo, Edo waxee isku badashay magaalooyinka ugu waaweyn caalamka, waxaana waqtigaas degenaa 1 miliyan oo qoys. Magaalada waxee noqotay caasimada dalka jabaan ayada oo xattaa imbaradoorka oo degenaa magaalada Kyoto. 263 sano kadib ayaa waxaa la riday dowladii shogun, si mar kale loo sameeyo xukumad Imbaradoor ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokyo&oldid=189767"